DADKI OO DHAN WAXAY NOQDEEN AL-SHABAAB, YAA HARAY MARK YAASE RUNTI AL-SHABAAB UGU DHOW? | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	DADKI OO DHAN WAXAY NOQDEEN AL-SHABAAB, YAA HARAY MARK YAASE RUNTI AL-SHABAAB UGU DHOW?
Posted on July 16, 2013 by wacyigelin	Waxaa maalmahan socda ku tilmaamidda cid kasta oo kasoo horjeesata inay tahay Al-Shabaab. Waxay ahayd beri dhowayd markii Axmed Madoobe oo isku sheega inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Jubbaland uu ku tilmaamaay madaxweynaha kale ee asaguna sheegta in loo doortay maamulka Jubbaland uu ku tilmaamay inuu ka tirsanyahay Al-Shabaab. Taas keliya maaha ee Axmed Madoobe wuxuu sheegay inay ciidamada dowladda federaalka ahi ay isu bedeleen Al-shabaab toosna ula jiraan. Arintan ayaa dad fara badan ka yaabisay. Waxaa warysi lala yeeshay Barre Hiiraale oo ku tilmaamay taas inay tahay mid lagu beer laxawsanayo dad shisheeye ah laguna marin habaabinayo shacabka Soomaaliyeed.
Su’aasha aan iswaydiiyay waxay ahayd: yaa udhow Al-shabaab ma Axmed Madoobe mise Barre Hiiraale? Jawaabta idinka ayaan idiin daynayaa balse waxaan dib u raacayaa in yar taariikhda labadan nin.
Aan ku bilaabo Axmed Madoobe. Waxaa la sheegaa inuu kasoo jeedo kilinka 5-aad oo aan anigu u aqaano Soomaali galbeed ahna dhulka Itoobiya gumaysato hadana ay ka dhistay xukuumad ku sheeg iyadu waxay rabto ka samaysa halkaas dadkuna dhibaato fara badan ka sheegteen. Dadka qaarkii waxay is oran karaan ninkan qabiil ayuu dowladda kilinka 5-aad ku riixayaa. Dhabtu sidaas maaha ee waxaa dadka ka sheegtay u badanyihiin dad ninka meesha loo dhiibay ay xigto yihiin. Yaanan ka bixin mowduuci aan ka hadlaynaye Axmed Madoobe oo ka soo jeedaa dhulkaas Soomaalida wuxuu ku soo biiray ururo diimeedyadii ka dagaalamayey Soomaaliya markii ay xabashidu soo gashay. Waxay xiriir dhow lahaayeen Xassan Turki oo ahaa nin ka tirsan Al-shabaab mar danbena lasoo sheegay inay xabsi geliyeen inkastoo cid si cad usoo bandhigtay arintaas aaanay jirin.
Haddaba Axmed Madoobe isagoo ku jira Al-shabaab ayaa waxaa loo keenay fikradda ah Azania oo uu markaas horboodayey Gaandi oo wasiirka gaashaandhigga ka ahaa xukuumaddii Sh. Shariif. Axmed Madoobe kuma dhiiran Karin inuu uruki uu ka tirsanaa oo markaa aad u xoog badnaa uu ka hor yimaado balse wuxuu sugay fursad taas oo timid markii Al-shabaab si aad ah loogu kululeeyay Muqdisho iyo gobalada kale ee dalkaba. Taas waxaa soo raacday in ay Kenya oo mar horeba indhaha ku haysay badda Soomaaliya oo heshiis kula gashay dowlado reer galbeed ah inay gaas ka qodaan kadib markii loo saxiixay iyadoo aan la marsiin barlamaanka balse mar danbe baarlamaanka Soomaaliya fashiliyay ay heshay fursad ay si xeeladaysan ay ugu heli karto wixi shalay loo diiday.
Kenya oo ay wehliyaan xildhibaano kasoo jeeda dhulka Soomaalida ee Kenya haysato, dad jagooyin horay uga soo qabtay xukuumadihii hore, iyo weliba isbahaysi ku salaysan qabiil ayaa waxay bilaabeen inay si habaysan ciidamada Kenya ku soo geliyaan Dhulka Soomaalida xorta ah (waa hadiiba Sooamali xor ah jirto maantaye). Taas waxay keentay in C/weli Gaas iyo Sh. Shariif ay kala hadlaan. Sh. Shariif wuxuu qalad k tilmaamay soo gelitaanka ciidamada Kenya maadaama aanay amar ka helin Dowladiisi ku meelgaarka ahayd meesha R/wasaare Gaas uu ku tilmaamay inay Kenyaatigu xaq u leeyihiin soo gelitaanka Soomaaliya maadaama buu yiri ay difaacayaan dalkooda. R/wasaaruhu ma wxuu wax ka ogaa waxa soo socda mise daacad ayay ka ahayd? Dalka Kenya ee la difaacayase ma waxaa ku jirta Kismaayo? Taas waxaan idiin daynayaa idinka jawaabteeda.
Haddaba Axmed Madoobe markuu hubsaday inay Kenyaatigu soo galeen oo ay qabsadeen Kismaayo amaba uu la qabtay ayuu si toos ah uga soo horjeestay Al-shabaab oo ay asxaab ahaayeen shalay.
Barre Hiiraale isagu wuxuu ahaa nin Soomaaliya dagaaladeedi qayb wayn ka ahaa, dowladihii is xigayna jagooyin kasoo qabtay. Barre Hiiraale sida la sheego wuxuu kasoo jeedaa gobolada dhexe inkastoo gedo iyo meelahaas uu aad ugu lug lahaa inti wixi ka danbeeyay bilowgii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya maadaama ay ehelkiisu (ama qabiilkiisu) deganyihiin. Barre wuxuu ka tirsanaa ururki ay lahaayeen dadka ka yimid gobolada dhexe ee la baxay dooxada Jubba oo maamuli jiray Kismaayo asagoo weliba ahaa ninka ugu tunka wayn. Dooxada Jubba hadii aadan si hagaagsan u aqoon waxay ku abtirsanayeen laba qabiil oo deris ah kuna heshiiyaya inay wixi manfac ah ee laga helo dhulkan barwaaqada ah (Jubbada hoose gaar ahaan dekadda iyo madaarka Kismaayo) ay wadaagaaan. Hadii aan is waydiino Barre Hiiraale weligii ma ka mid noqday Al-shabaab? Jawaabtu waa cadahay. Barre Hiiraale weligii Alshabaab kama mid noqon waana kasoo jorjeedi jiray. Waxaa taa cadayn uah inuu Barre xiriir aad u dhow la lahaa amaba weli la leeyhay Ahlul-Sunna Wal-Jamaacah oo ah urur uu Meles sameeyay inti aanu kala bixin ciidamadiisi Muqdisho iyo gobolada dhexe. Waxaan anigu tuhunsanahay in Barre Hiiraale iyo Cabdi-waal nin la yiraahdo ay qayb wayn ka qaateen samaynta ururka Ahlsunnah Waljamaacah oo aan marki la sameeyayba aan barwareedkan soo geliaya sheeko kaftanka qaxwada ah oo ay ku wada hadlayaan khadka teleefoonka Barrre, Cabdi-waal iyo Meles.
Waxyaabahaas aan soo sheegay oo dhan waxay cadaynayaan inaanu Barre lug ku lahaan kariin Al-shabaab uuna Axmed Madoobe yahay ninka u dhow inuu qayb ka yahay Al-shabaab beritoolena uu dib ugu noqon karo hadii fursad uu ka arko dhinocooda. Axmed Madoobe arintiisu waa “ la joojiyaa banaan la jiifiyaana banaan.” Dhinici wax laga helayo ayuu raacayaa oo maantay waxaa u irmaan dekadda iyo gedgida diyaaradaha hadii hunguri ka wayn loo sheegana xitaa Kenyaatiga iyo raggi waxan lasoo dhisayba waa ka tegayaa oo meeshi roobku ka da’o ayuu aadayaa.
Mowduucu wuxuu ahaa cid walba Alshabaab malagu tilmaami karaa ee waxaa maalmahan asna afka kala furtay madaxweyne gobaleedka Puntland C/raxman Faroole oo cid walba ku tilmaama Alshabaab. Waxaan aad ula yaabay Faroole oo beri dhowayd ku faanayey in dowladiisu ay bartay habka dowladnimada Soomaalida inteeda kale uu hadda laynayo shacabka Puntland. Mar laga joogo sanad ayay reer Puntland bilaabeen inay ku mudaaharaadan Faroole. Markaas waxaa ka mid ahaa waxa mudaaharaadaayey xayawaanka haba ugu firfircoonaadaano dameeraduye. Dameero diidan maamulka Faroole oo dushooda ay ku xardhantahay “Doonimayno Faroole” ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadkaas. Laga soo bilaabo waqtigaas waxaa amni xumo iyo dilal fara badan ka dheceen Puntland oo ka mid ahayd meelaha ugu degan dalka. Marki qof la dilo ama dhib kale dhaco wuxuu Faroole usaarin jiray dadka qaxootiga ku ah dhulkaas oo ka yimid koonfurta iyadoo mararka qaarkood marki wax dhacaan iyaga ama la dilo ama la gubo guryohooda. Faroole wuxuu dadkaas u abuuray cadaawad asagoo dadka reer Puntland u tusay inay yihiin cadaw ku dhex nool.
Waxaa dhacday inay socon waysay eedaynti dadki qaxootiga ahaa. Faroole ayaa fahmay inuu markan u baahanyahay inuu shaxda wax ka bedelo. Taas keliya maaha ee waxaa sii batay mucaaradka Faroole iyadoo ay kusoo biireen oday dhaqameedyo iyo weliba dad dowladihii ku meelgaarka ahaa iyo kuwi Puntland soo marayba jagooyin kasoo qabtay. Waxaa dadkaasi ugu tun waynaa C/weli gaas oo kusoo wareegay Puntland kadib markuu ku guuldaraystay inuu wax ka noqdo dowladda federaalka ah ee iminka jirta. C/weli gaas wuxuu damacsanaa amaba Faroole umaleeyay inuu damacsanaa inuu u tartamo xilka madaxweynenimo. Faroole oo aan aqbali Karin ayaa ku cadaadiyay inuu ka tago Puntland ama ha hendedo ama si toos ha ugu sheegee.
Mucaaradka Faroole oo aad u baty ayaa waxaa dhacday in doorashooyin qorshaysnaa oo Faroole aaminsanaa inuu siduu rabo wax u dhigi karo ay reer Puntland ka hor yimaadeen. Waxay ahayd maalin dhowayd marki sanaadiiqdii lagu gubay Garoowe. Taas waxay sababtay inaanay sidi Faroole doonayey wax u socon oo la joojiyo doorashadi gebi ahaanba. Dadka waxa aad uga careysiiyay waxay ahayd kadib markii xisbi siyaasadeed dadka lagu jahawareeriyo laguna magacaabo HORSEED uu sameeyay Faroole taas oo uu ku doonayey in xubnaha xisbigiisa loogu shubo doorashada sidaasna uu mar kale ugu soo boxo xilka madaxweynaha.
Faroole ayaa cod dheer oo aan ganbad lahayn ku sheegay in dad qaswadayaal ah oo ka tirsan Al-shabaab kana soo jeeda Puntland ay ka danbeeyeen gubidda saadiiqda iyo horusocod la’aanta doorashooyinka.
Aqristoow caruurtan iyo haweenkan Al-shabaab miyay ka tirsanyihiin. Waxaa meesha ka maqnaa dameeradi kol hore ka qayb qaatay mudaaharaadka oo aan hubo in la dhihi lahaa Al-shabaab ayay ka tirsanyihiin hadii xaadir ku ahaan lahaayeen meesha. Haddaba hoos ayaad ka arki kartaa dadki ka qayb qaatay mudaaharaadka adigaana go’aansanaya inay Al-shabaab ka tirsanyihiin iyo in kale.
Waxaa sidoo kale maalmahaan dagaal sokeey kasoo cusboonaaday gobalka Shabeelada Hoose oo ay isku haystaan laba qabiil oo mid walba sheeganayo in isagu ugu badanyahay gobolka xaqna u leeyahay inuu maamulo. Cidda u badan garashadeeda adiga ayaan kuu daynayaa aqristoow. Waxaa xusid mudan in labadan qabiil aanay isku awood ahayn hadii ay ahaan lahayd tirada amaba awoodda ciidan. Intaas keliya maaha ee waxaaba la sheegayaa in mid ka mid ah labada qabiil uu adeegsanayo ciidamada dowladda. Waxaan jeclan lahaa inuu fahmo aqristuhu in aan lagu kadsoomin magaca ciidamada dowladda maxaa yeelay meesha ciidan dowladeed ma joogo ee waa maleeshiyaad qabiil oo mid walba qabiilkiisa u xaraysanyahay maalinki xaalku xumaadana lasoo safta qabiilkooda. Taas keliya maaha ee waxaa maleeshiyaadkan laguba hendedaa dowladda marka laga doonayo jago amaba dhaqaalo. Ciidan malagu tilmaami karaa maleeshiyaadka noocan ah? Aan usoo noqono arintii aan ka hadlaynay ee xurgufta labadan qabiil ayaa keentay in midkood ku tilmaamo kan kale inuu Al-shabaab ka tirsanyahay. Sababta keentay in Al-shabaab lagu tilmaamo qabiilka kale waxay tahay si loo jahawereeriyo dadka aan dhabta u ogayn meesha uu dagaalku salka ku hayo oo ah yaa talada gobolkan iyo kheyraadkiisaba sadbursi ku helaya.
Haddaba waxaa maalmahan mid ka mid ah labada qabiil ee aan kor kusoo sheegay barwareedyadiisa ku badnaa ku tilmaadidda qabiilka kale Khawaarij, Al-shabaab, iyo weliba dad aan deegaanka ku abtirsan. Xaqiijinta yaa ku abtirsada deegaanka yaanse ku abtirsanin waxaan kuu daynayaa adiga aqrsitoow ee bal dib u eeg. Maalin dhowayd ayaan ka aqrinayey Waagacusub maqaal uu qoray ninka leh barwareedkan oo sheegaya in lasii cayrsanayo khwaarijtii oo gobolka laga sifaynayo. Dabcan Khawaarijta wuxuu ula jeedaa qabiilka kale asagoo ku sifaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanyihiin maadaama mar walba erayga Khawaarijta uu u adeegsado Al-Shabaab.
Intaas kaliya maahee aqristoow waxaa jira in Soomaalida dibadda joogta ay iyaguna ciddi ay ciil u qabaan ama qabiil dartii u nacaan ay u gudbiyaan sir doonada reer galbeedka iyagoo leh qofkan Al-shabaab ayuu ka tirsanyahay amaba wuu caawiyaa. Qofka markii arintaas lagu soo eedeeyo waa la dabagalaa amaba qofki soo eedaysay qudhigeeda ayaa la daba dhigaa si ay cadayn u keento. Qofku habab fara badan oo shaydaanimo inta adeegsado ayuu xitaa hal eray oo u eg inuu qofka Al-shabaab jecelyahay ama la jiro ku helaa sidaas ayaa lagu xiraa qofka. Sanaddo ayaa laga yaabaa inuu qofku xabsiga ku jiro iyadoo dacwad ku socoto mararka qaarna jirdil, hendedaad iyo wixi la mid ah ayaaba denbiga loogu sugaa. Inta badan ugu danbaynta waxay ku dhamaataa in lasoo deeyo dadkaas maadaama aan lagu haynin denbi oo masabidaal agu soo qabtay. Laakiin ogoow aqristoow waqti badan oo qaali ah ayaa ka lumay qofkaas amaba xitaa qoyskiisi uu masuulka ka ahaa ayaa burburay sidoo kale ehelo iyo dad masaakiin ah oo uu wax siin jiray ayaa baaba’ay intuu xabsiga ku jiray.
Hadaba miyaanay macquul ahayn in aniga ama adiga nagula eedeeyo inaan Al-shabaab ka tirsanahay hadii aanan taageerin dadka danahooda geed kore iyo mid hoosaba u koraya xalaal iyo xaaraana aanay ukala soocnayn? Taas keliya maaha ee miyaanay macquul ahay mid aadanba horay isu aqoon balse kuu neceb qabiil dartii inuu kugu been abuurto si uu dhib kuugu gaysto haba yaraadee?
Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu Soomaalida quluubtooda saafi isaga dhigo oo ay isjeclaadaan taas ayaana naga saari karta dhibka aan ku jirno. Midnimo wixi aan ku wayno qabiil qabiil iyo shisheeye kalkaal ku helimayno ee Soomaalinimada halaga hormariyo qabiilka iyo danaha shakhsiyadeed.
Filed under: Uncategorized « WAREYSIGA MADAXWEYNHA 07 07 2013 UGAAS MAXAMED WELI MUXUU KA YIRI ARIMAHA JUBOOYINKA? »